ND YAG Laser TATOO SOO SAARKA Warshad - Shiinaha Shiinaha ND YAG laser TATOO SOO SAARKA Soo-saareyaasha, shirkado cusub
Wadnaha Dheer 1064nm Xanuun Bilaash ah Laser Timaha LP02
Nidaamka jawharad-hagaajinta Q-ku-beddelka wuxuu si wax ku ool ah ugu daaweyn karaa midabbada isku dhafan iyada oo roobabku soo da'ayaan isha ka baxsan ee leh isbeddelka midabka cudurada ee isha.
Laablaabidda Ka-qaadista Wrinkle Picosecond Laser ee Ganacsiye P8
PicoSecond Laser waxay isticmaashaa garaacis aad u gaaban (hal tirilyan oo ilbiriqsi ah dherer ahaan) si ay ugu garaacdo melanin cadaadis weyn, melaninku wuxuu u kala jajabiyaa qaybo yaryar oo u eg boodh. Sababtoo ah qurubyada ayaa aad u yar.
1200W Awoodda Sare Micro Picosecond 755nm Laser Tattoo Ka-saarista Tilmaamaha Dhalashada Ka-saarista P7
Q-beddelaad nd yag laser 1064nm 532nm 1320nm laser saarista K6S
Tamarta laser-ka ee ay soo saarto Nd: YAG laser waxaa si buuxda u nuugi kara melanin, melaninkuna si dhakhso leh ayuu u sii fidayaa oo wuxuu u kala baxayaa qaybo aad u yar oo ku filan in lagu shiido nidaamka dheecaanka.
Mashiinka qufulka leh ee yag laser-ka awood badan K9
Tamarta Q-bedeshay ND: laser YAG waxaa nuugi kara melaninka buluugga iyo madow Melaninku wuu kala jajaban doonaa wax aad u yar oo ay ku dhex gali karaan nidaamka lymfatikada ama jirka uga soo bixi karo.
Tayada ugu saraysa ee mashiinka ka saarista tattoo-yag laser-ka ah K10
Qalabka Tattarka Laser Nd yag wuxuu qaataa habka loo yaqaan 'Q swithch mode', kaas oo adeegsanaya leysarka la soo saaro isla markiiba si loo jebiyo midabka qaabdhismeedka jirran. Taasi waa aragtida laser-ka ee isla markiiba.
1064nm 532nm shandad la qaadan karo nd yag laser pigments laser saarista mashiinka K12
Q Switch Nd: Teknoolojiyada ka qaadista Tattoo Yag Laser waa saameynta qaraxa laser.Sida aan wada ognahay, laser wuxuu dhex geli karaa dusha maqaarka meelaha maqaarka qoto dheer ee jira.
Mashiinka Mashiinka Tattoo-ka ee La-qaadan Karo Picosure Picosecond 1064 Nm Q Switch Nd Yag P6
Q-Switched Nd YAG Laser Handpiece Ruby Laser Tattoo Mashiinka Mashiinka wuxuu keenaa awood aad u sareysa laakiin halbeegyo aad u gaaban oo ah nalka laser kaas oo sii mara maqaarka si loo jajabiyo walxaha midabka midabka leh.
Qalabka Ka-qaadista Tattoo Laser Picosecond Lasiko Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cusbooneysiinta Y12
Adoo adeegsanaya leysarka xulashada sawir-qaadista ee 'photothermolysis' sidaa darteed laser-ka ayaa soo saaraya tamar saa'id ah oo saa'id ah oo ay nuugaan qaybaha midabka, taasoo keentay ballaarinta
Ka saarida midabka Pico seco laser pigment nd yag tattoo saarista qalabka quruxda laser laser Y15
PicoSecond Laser waxay isticmaashaa garaacis aad u gaaban (hal tirilyan oo ilbiriqsi ah dherer ahaan) si ay ugu garaacdo melanin cadaadis weyn, melaninku wuxuu u kala jajabiyaa qaybo yaryar oo u eg boodh.